Fifidianana · Jona, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Jona, 2009
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Jona, 2009
Tontolo Arabo: Aleo hanao izay tiany eo ny Iraniana
Ejipta 25 Jona 2009
Nitana ny votoatin'ny bilaogy arabo efa ho herinandro izao ny fifidianana filoham-pirenena sy ny vokany natao tany Iran, miaraka amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpitoraka bilaogy eny rehetra eny. Mangataka an'izao tontolo izao i Harrega mpitoraka bilaogy jordaniana hiala mandritra ny famahanan'ny Iraniana samy irery ny aferany: Nifidy ry zareo, na marina io...
Iran: Fanoherana sy Famoretana
Iràna 17 Jona 2009
Iran: Hifidy sa tsy hifidy
Iràna 12 Jona 2009
Iray amin'ireo resaka mandeha mandritry ny fifidianana izay ho filoham-pirenena iraniana ny hoe ‘hifidy sa tsy hifidy’. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny hoe handray anjara amin'ny fifidianana sa hanao ankivy azy io. Na dia vondrona mpanohitra maro aza no niantso fibodoana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 12 Jona ho...
Ny fifidianana Iraniana an-tsary
Iràna 10 Jona 2009
Ny Fifidianana izay ho filoham-pirenena iraniana dia hatao ny faha 12 Jona. Natokana fotsiny ho an'ny lehilahy, efatra monja tao anatin'ny 400 mahery, lahy sy vavy mifangaro, nisora-tena, no nomen'ny manam-pahefana fankatoavana ny firotsahany hoy ny Mpiaro ny tolom-piavotana [Guardian Council]. Ny maso matsilon'ireo mpakasary-mpitoraka blaogy dia mamandrika sary momba...